> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray on HTC ugaar
Sidee baad u bogsan xiriirada on HTC ugaar?
Liiska My xiriirka HTC ugaar waayay. Waxaan ka fikiray, waxa laga yaabaa in la tirtiro, waayo, anigu waxaan kala soocaa xogta aan telefoon oo ma u isticmaali ka dib. Waxaan u sheegay in aan u soo celin karo gala aan xisaab Google. Waan ku sameeyey laakiin waxba aan Gmail heli. Sidee ayaan u soo ceshano karo xiriirada aan ka HTC ugaar?
Si aad u soo celin xiriirada tirtiray on HTC ugaar ka Gmail, waxaad u baahan tahay in ay marka hore ku dari xisaabtaada Google in aad telefoonka, ka dibna si ikhtiyaar goobta si aad u bilowdo .Wadashaqayntaas. Marka aad u cusboonaysiiso liiska xiriirada ku saabsan telefoonka, xiriirada aad xisaabta Google noqonayaan isku mar updated doonaa. Waa hagaag, waxaa shardi ah: waxaad u baahan tahay in nidaamka liiska xiriirada aad in aad xisaabta Google ka hor inta aadan badiyay, si ay jiraan gurmad ah si aad u soo celiyo. Ma aad heli kartaa wax aad xisaabta Gmail. Waxaa laga yaabaa in aad marnaba synced xiriirada ku saabsan HTC ugaar. Under xaaladan, waxaad soo kaban karto, kaliya aad xiriirada HTC ugaar by si toos ah aad ka baareyso telefoonka si loo arko haddii aad ka heli kartaa.
Sida loo sameeyo HTC ugaar xiriirada kabashada
Waxa aad u baahan tahay si ay u diyaariyaan: aad HTC ugaar, cable USB ah, computer Windows iyo HTC ugaar kabashada xiriirada qalab: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) .
Tani software kabashada xogta ma aha oo kaliya kabashada xiriiro. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado macluumaad kale oo ku saabsan qalab Android aad, ay ka mid yihiin fariimaha, sawiro, videos, audio iyo waraaqaha. Waa maxay dheeraad ah, ma aha oo kaliya HTC ugaar, Wondershare Dr.Fone for Android taageertaa badan oo telefoonada Android iyo murriyado, loo dhan yahay ee Samsung, Motorola, LG, Sony, Google, iwm Waxay noqon kartaa doorasho fiican u soo kabsanaya xiriirada aad HTC ugaar.
Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah:
Tallaabada 1. Hubi goob debugging USB aad telefoonka ee
Tallaabada ugu horreysa waa hubinta goob debugging USB ah ee aad taleefan iyo in la hubiyo in la karti.
Tag Settings , garaac Codsiyada , oo taga si Development . Hadda calaamadee sanduuqa ka dib markii debugging USB .
Fiiro gaar ah: Haddii aad mar hore ayaan u hubiyaa ka hor, waxaa Tagin Anoo Kali ah oo u guuraan tallaabada xigta.
Tallaabada 2. bareesada telefoonka galay kombiyuutarka
Hadda, aad HTC ugaar weli waa hab debugging USB. Waxaa bareesada galay computer ka, halkaas oo aad download oo lagu rakibay Wondershare Dr.Fone for Android. Orod barnaamijka on your computer oo aad arki doonaa suuqa kala hoose ee dhowr ilbiriqsi.
Tallaabada 3. baarista HTC ugaar
Ka hor inta aadan iskaan telefoonka, hubi batteriga ku yaal, iyo in la hubiyo in baytari waxaa ugu yaraan lagu eedeeyay 20%, si ay u taageeri karaan dhamaystiran baaritaan. Markaas riix badhanka Start ku saabsan suuqa kala kor ku xusan si ay u bilaabaan.
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, barnaamijka wuxuu u baahan yahay in aad ogolaansho in ay sii wadaan baaritaan, oo waxaa jiri doona app ah - Codsiga Superuser dhisayaa shaashad aad telefoonka ee (ku hayaan shaashadda aad telefoonka ee furan). Marka aad aragto si this on barnaamijka, fadlan si aad telefoon oo guji U ogolow in ay oggolaadaan.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray xiriirada on HTC ugaar
Skaanka qoto dheer aad qaadan doonta muddo. Just sugnaa oo aad telefoonka ku xiran waqtiga oo dhan. Marka scan la soo gabagabeeyo, waxaad ku eegaan karo xogta laga helay mid ka mid ah natiijada scan ay ka mid. Sida ay u soo xiriiro, waxaad xitaa ka akhrisan kartaa horyaalka shaqada, Cinwaankaaga email, shirkad, iwm Waxaad eegista sax karaa waxyaabaha aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo gujinaya bogsadaan.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone for Android helayo labada xiriir tirtiray (muujinaya in orange) iyo xiriirada jira (muujinaya in madow) on your HTC ugaar. Haddii aad rabto in aad kuwa tirtiray oo kaliya, waxaad riixi kartaa batoonka (oo keliya ayaa soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray) dusheeda ee suuqa si ay u kala soocaan.
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa HTC Mid ka mid ah
Sida loo akhriyo Old Facebook Rasuulka Messages on Android
Photo kaabta Android: Photo kaabta in Google + iyo computer Si fudud